Haalli OMN keessatti dhalatti garamitti buubbuisaa jira? Gaafiif deebisaa RSN Dr. Hamzaa waliin taasise.. – Welcome to bilisummaa
Haalli OMN keessatti dhalatti garamitti buubbuisaa jira? Gaafiif deebisaa RSN Dr. Hamzaa waliin taasise..
OMN kana booda garam deema? kufaati amma keessa bu’e kanarra ni fayyaa? Ummanni Oromoo kana booda sabaahimaa kanaaf amantii akkami qaba?
Tags Dr.Hamzaa omn
Previous Dimookraasii, Filannoo fi Angoo Siyaasaa Maaliif Barbaachisa?
Next Tarsiimoo Siyaasaa (Kutaa Qaraa)